July 30, 2021 September 7, 2021 N88LeaveaComment on के तपाईलाई ॐ को वास्तविक अर्थ थाहा छ ? जान्नुहोस्
पूर्वयुवराज पारसले प्रहरीलाई थर्काए, प्रहरीले ‘सम्झाएर’ छोड्यो भिडियाेसहित
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वयुवराज पारसले प्रहरीलाई थर्काए, प्रहरीले ‘सम्झाएर’ छोड्यो भिडियाेसहित
पूर्वयुवराज पारस शाहले प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेका छन्। शुक्रबार साँझ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा शाहले प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेका हुन्। हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकलमा सवार शाहलाई प्रहरीले समातेको थियो। पारसले त्यसक्रममा प्रहरीलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा छोड्न भनिरहेको सार्वजनिक भएको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ। उनी समर्थकसहित देखिएका थिए। भिडिओमा एक जना प्रहरीले पारसको हात समातेर कतै लैजान खोजेको देखिन्छ। तर, […]
उपचार गरेर घर फर्किदै गरेका दम्पती एक्कासी कर्णालीमा नदिमा वेपत्ता ?
July 30, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on उपचार गरेर घर फर्किदै गरेका दम्पती एक्कासी कर्णालीमा नदिमा वेपत्ता ?
डोटी । डोटीका चन्द्रप्रकाश जोशी र उनकी पत्नि नेपालगञ्ज उपचारका लागि गएका थिए । उनीहरु त्यहाँ उपचार गरेपछि फर्कने क्रममा चिसापानी पुगेका थिए । तर एकाएक उनीहरु कर्णालीमा वेपत्ता भएको समाचार आएको छ । उनीहरु चढेको गाडी कर्णालीमा हेलिएको बताइएको छ । उपचार पछि घर फर्किरहेको एक दम्पती कर्णालीमा वेपत्ता भएको समाचारले सबैलाई चिन्तित पारेको […]
अब ओली प्रधनमन्त्री नबन्ने, अघि सारे नयाँ पुस्ताका यी नेता
July 30, 2021 N88LeaveaComment on अब ओली प्रधनमन्त्री नबन्ने, अघि सारे नयाँ पुस्ताका यी नेता
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने मुख्य भूमिका निर्बाह गरेका उपाध्यक्ष भीम रावल गएको असार २० गतेपछि पार्टी एकताको सबभन्दा चर्को कुरा गर्न थालेका छन् । ओली सरकारबिरुद्ध सत्तोसराप गर्ने नेत्तृत्व सम्हालेर पार्टीभित्र सरकारबिरोधी समूह निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेका नेता रावललाई असार २० पछि एकाएक पार्टी एकताको ब्रम्ह ज्ञान कसरी प्राप्त भयो […]
July 30, 2021 N88LeaveaComment on यसरी मिल्यो गठबन्धनमा मन्त्रीको भागबण्डा, सरकारमा नजाने माधव पक्षलाई अर्को यस्तो अवसर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागवण्डाको काम टुंग्याएका छन् । विहिवार गठबन्धन दलहरुबीच बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लगाएको हो । गठबन्धनले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहभागिता विनै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गरी भागबण्डा मिलाएको हो । नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि प्रयास जारी रहेकाले माधव पक्ष तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो […]